Fiqh – Garanuug
October 23, 2015	Abwaan, Fiqh 0 5,824
Caashuuraa waa maalinta tobnaad ee bisha Muxarram, waana maalin aad u fadli badan. Markii uu Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallama- tagey Madiina ayaa wuxuu arkay Yuhuuddii oo soomaysa maalinkaas. Markii uu waraystayna waxay u sheegeen inuu yahay maalintii Alle uu Nebi Muuse- calayhis salaam- iyo dadkiisii ka badbaadiyey Fircoon. Nebigu- ...
August 10, 2015	Abwaan, Fiqh 0 4,693
August 10, 2015	Abwaan, Fiqh 0 2,890
Udxiyadu waa Alle- subxaanahuu wa tacaalaa– oo dartiis xoolo (geel, adhi, lo’) loo qalo maalinta Ciidul Adxaa iyo maalmaha ka dambeeya. Udxiyadu waa astaan ka mid ah astaamaha Islaamka, diintuna innagu boorrisay in aan ku dedaalno, waana halka Ciidul Adxaa ay ka qaatay magaceeda, oo waa Ciiddii Udxiyada. In kasta ...
Sakaatul Fidri (Fidro) (زكاة الفطر)
August 10, 2015	Abwaan, Fiqh 0 6,533
Qofka Muslimka ahi marka uu dhammeeyo soonka Ramadaan, waxaa laga rabaa in uu bixiyo sakaatul fidri, haddii uu awoodo. Awooddaasi ma aha in uu hodan ahaado, ee waa in uu haysto wax dheeraad ka ah masruufka naftiisa iyo ehelkiisa maalinka ciidda ah. Sakaatul fidriga waxaa laga rabaa dadka oo dhan: ...
August 10, 2015	Abwaan, Fiqh 0 6,124
March 30, 2017	121,012